N'ime awa ole na ole Xiaomi doziri nsogbu nke mmelite nke Mi A1 | Akụkọ akụrụngwa
Eziokwu bụ na enwere ekele na ụlọ ọrụ China nwetara batrị na mbipụta a yana n'ime awa ole na ole kemgbe mwepụ nke mmelite ahụ n'ihi ọtụtụ nsogbu na Gam akporo 8.0 Oreo, dị ugbu a nye onye ọ bụla ọzọ yana yana mgbakwunye agbakwunyere.
Ihe nchebe ahụ bịara n'oge iji dozie ọdịda ahụ nke mere ka ọnụ ahịa ahụ kwụsịtụ na arụmọrụ ya, yana ụfọdụ ọdịda n'ụdị nkwụsị na oku, yana oriri batrị dị elu mgbe ọ dịghị otú ahụ na mbụ, Njikọ njikọta Bluetooth na ihe ndị yiri ya.
Anyị enweghị ike ime mkpesa ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị a ebe ọ bụ na ọnụ ọnụ Google abụwo ndị mbụ natara ụdị a nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, ihe ọ bụghị ndị njedebe niile nwere ike ikwu. Ma n'ezie, na-anata ọhụrụ version nke usoro nke mere na ekwentị bụ kpam kpam ejighị n'aka abụghị ozi ọma ma.. Akụkọ ahụhụ ahụ echeghị na awa ole na ole mgbe mwepụtara nke a kachasị ọhụrụ, mkpesa izizi bịarutere.
N'echiche a, na mgbakwunye na mmezi ahụhụ nke nsụgharị ọhụrụ ahụ kpatara, ihe ngwugwu nke aha oru OPR1.170623.026.8.1.10 choro yiri idozi oke oriri batrị na ihe ndi ozo adighi anya na ụfọdụ ndị ọrụ rụrụ ụka. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa bụ na anyị nwere nbudata mbudata dị, yabụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ nke Xiaomi a, lelee ntọala ahụ n'ihi na ị kwesịrị inwe mmelite dị. Nke a nwere ike iwe ogologo oge n'ọnọdụ ụfọdụ, mana ọ gaghị adị ogologo oge.
Ogo maka ndị na-enweghị ụdị Oreo ọ bụla arụnyere na Xiaomi bụ 1.1 GB ma ọ bụrụ na ị ga-etinye patch melite erughị 90 MB. Anyị nwere olile anya na edozi nsogbu ahụ, yabụ gwa anyị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke Mi A1 a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » N'ime awa ole na ole Xiaomi doziri nsogbu nke mmelite nke Mi A1
Ọchịchịrị Mkpụrụ Obi Remastered, mbụ nkeji nkeji esịmde fọrọ nke nta niile nyiwe na HD
Asambodo gosipụtara ikike batrị nke Samsung Galaxy S9 na S9 Plus